♪ Angel Shaper: HAPPY FATHER'S DAY!!!
19 June 2010 at 10:20
“ဖခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္တာစေတနာဟာ မိခင်နဲ့ မခြား အတူတူပါ့ပဲလေ။
တစ်ယောက် တစ်မျိုးမို့ နှိုင်ယှဉ်စရာ ဘယ်အရာမှမရှိပါ။”
ခုလို Father's Day မှာတူမတော် တယောက် အမှတ် တရလေး အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်လို့ ပြောရင်-အရာရာ အဆင်ပြေ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ။
PS=>> ဖခင်ဖြစ်သူတွေ ပြောလိုက်ပါရဲ့နော် ။ “ဦးတည်” တို့ ကလေးကို မုန့်ဖိုးပေးရလိမ့်မယ် ဒီလောက်လိမ္မာ တဲ့ ကလေးရှာကြည့် ဦး ... ပြောမှသိမလုပ်နေတဲ့..ခွိ (အချွန်နဲ့မသည်။)
အဖေများနေ့မှာ ချစ်သော ၊ ခင်သော ဖခင်များနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ....
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဖခင်များနေ့ဖြစ်ပါစေ..အိန်ဂျယ်ရေ..... ဘ၀မှာ ဖခင်ရှိသေးသူများအတွက် မမေ့မလျော့နဲ့ နှုတ်ခွန်းလေးတွေ ဆက်နိုင်ကြပါစေလို့...
အင်း..နေ့တွေ နေ့တွေများ များလာတယ်နော်.။ အမေများနေ့ ၊ အဖေများနေ့ ၊ ချစ်သူများနေ့ ၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ဖြင့် ကိုယ့် နေ့ကိုယ်တောင် မေ့နေပြီး။ ဟီးးး
Thanks, Thamee,4your beautiful post.
And the poem is touching 2.
20 June 2010 at 09:05
အဖေများနေ့ မှာ အဖေ့ကိုတော်တော်လွမ်း
သွားတယ်ဗျာ . . . တကယ်ဆိုတူတူ
နေချင်ပေမဲ့ ဘ၀အခြေအနေက ခဏခွဲခွာ
လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ အိန်အိန် အဲအဲ ယောင်လို့ အိန်ဂျယ် ရေ ဟီး စတာနော်
အဖေများနေ့မရောက်ခင် အိမ်ခနပြန်တုန်း အဖေ့ကို ကန်တော့ခဲ့ရလို့..း)
ညီမလေးရေ....အဖေများနေ့က ကျော်သွားပြီဆိုပေမယ့်လို့ လာဖတ်သွားတယ်....ကဗျာလေးလည်း ကောင်းတယ်....အစ်မကလည်း အဖေကို အရမ်းချစ်တဲ့သမီးလေ....
အစ်ကိုလည်း.......အချိန်ဆင်းရဲလွန်းသွားလို့ အဖေများနေ့ ရောက်တာတောင်မသိလိုက်ပါဘူးဗျာ.....။
ညီမလေး ဖေဖေ့အတွက် ရေးထားတဲ့ကဗျာလေး ခံစားဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ.......။
အော် အိန်ဂျယ်လေးရယ် အဖေ အမေ တွေကို သိတတ်လိုက်တာ ကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေကွယ်။
အော် မေ့နေလို့ အကိုများနေ့ ရောက်လာရင်လဲ ကိုကြီးပုံမှန်ကို သတိရနော် ....
အဖေမရှိတော့မှ အဖေ့မေတ္တာတွေကို တမ်းတမိနေတယ်
အဖေများနေ့ ပိုစ့်လေးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ နတ်သမီး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။